ပေါ့ဆမှု​တစ်​ခု​ကြောင့်​ ထီ​ပေါက်​​ပေမယ့်​ ထီလက်​မှတ်​​ပျောက်​သွားလို့ ဝမ်းနည်း​နေတဲ့ ​ဆောင်​ယွန်းစံ - Myannewsmedia
​ပေါ့ဆမှု​တစ်​ခု​ကြောင့်​ ထီ​ပေါက်​​ပေမယ့်​ ထီလက်​မှတ်​​ပျောက်​သွားလို့ ဝမ်းနည်း​နေတဲ့ ​ဆောင်​ယွန်းစံ
ချိုသာတဲ့ အပြုံး​လေးနဲ့ သရုပ်​​ဆောင်​ပိုင်းမှာ ထူးချွန်​လွန်းတာမို့ ပရ်ိသတ်​​တွေ အရမ်းချစ်​ကြတဲ့ မင်းသမီးေ​ချာ​လေး ​ဆောင်းယွန်းစံက​တော့ ​လတ်​တ​လောမှာ ​ပေါ့ဆမှု​တစ်​ခု​ကြောင့်​ ထီ​ပေါက်​​ပေမယ့်​ ထီလက်​မှတ်​​ပျောက်​သွားလို့ ဝမ်းနည်း​နေတဲ့ ​အ​ကြောင်းကို လူမှုကွန်​ယက်​မှာ ​ဝေမျှ​ပေးထားတာ ​တွေ့ရပါတယ်​။ ထီ ၅သောင်း ဆု​ပေမယ့်​လည်း ကံတရား​ကြောင့်​ ​ပေါက်​ခဲ့တဲ့ ထီမို့ ပိုပြီး စိတ်​မ​ကောင်းဖြစ်​​နေတာပါ​နော်​။
ချစ်​ပရိသတ်​​တွေအတွက်​ ​ပေါ့ဆမှု​တစ်​ခု​ကြောင့်​ ထီ​ပေါက်​​ပေမယ့်​ ထီလက်​မှတ်​​ပျောက်​သွားလို့ ဝမ်းနည်း​နေတဲ့ ​ဆောင်​ယွန်းစံရဲ့အ​ကြောင်းကို ​ဖော်​ပြ​ပေးလိုက်​ပါတယ်​​နော်​။
​ဆောင်းယွန်းစံက​တော့ “မနက်က ထီဆိုင် ဖုန်းဆက်တယ်…ပုဂံမှာထိုးခဲ့တဲ့ထီလတ်မှတ်က ငါးသောင်းဆုပေါက်တယ်တဲ့…! ဒါမဲ့ အဲ့ထီလတ်မှတ်တွေက ဘယ်မှာ ကျန်နေခဲ့မှန်းတောင်မသိဘူး… ကိုယ့်ရဲ့ မကောင်းတဲ့ အကျင်တခုရှိတယ်.! ထီထိုးပီးတိုင်း ထီလတ်မှတ်ကို ဘယ်မှာ ထားမိမှန်းမသိတာ.. တခါမှလည်း မတိုက်ဘူးဘူး.!. 😢ထီပေါက်ပီး ထီလတ်မှတ်ပျောက်တာ ငါလေ😫” ဆိုပြီး သူမရဲ့ ​အ​ကြောင်းကို ဝမ်းနည်းစွာ ​ပြောလာတာပါ။
၂၀၁၈ အကယ်​ဒမီ​ပေးပွဲမှာ ဗန်းကိုင်​အဖြစ်​ပါဝင်​ပြီး​နောက်​ပိုင်း အနုပညာလှုပ်​ရှားမှု​တွေ ဆက်​တိုက်​ပြန်​လုပ်​ဖြစ်​​နေတဲ့​ ​ဆောင်းယွန်းစံက​တော့ ပရိသတ်​​တွေရဲ့ အချစ်​ကို ပိုပိုပြီး ရ​နေတာပါ။ချစ်​ပရိသတ်​​တွေ​လည်း ထီ​ပေါက်​ပြီး ထီလက်​မှတ်​​ပျောက်​သွားခဲ့တဲ့ ​ဆောင်းယွန်းစံလိုမျိုး မဖြစ်​​အောင်​ သိန်းထီဆုကြီးဖြစ်​သွားနိုင်​တာ​ကြောင့်​ ဂရုစိုက်​ကြပါ​နော်​။
Source:Saung Yoon San’s Facebook
Previous post ‘ပုရိသ’ ရုပ်ရှင်ကြည့်ဖို့ ပရိသတ်တွေကို ရုပ်ရှင်ရုံနှစ်ရုံအပြတ်ငှါးပေးပြီး Surprise လုပ်ခဲ့တဲ့ နေခြည်ဦး
Next post ဒေါင်းနဲ့အတူ ရုပ်ရှင်ကားရိုက်ကူးဖို့ ဆေးလိပ်သောက်တက်အောင်လေ့ကျင့်နေတဲ့ နေခြည်ဦး